हाम्रो सीमाको सम्मान नगर्नेलाई सबक सिकाउछौ भन्दै भारतले दियो चेतवान। – Namaste Dainik
June 3, 2020 NamastedainikLeaveaComment on हाम्रो सीमाको सम्मान नगर्नेलाई सबक सिकाउछौ भन्दै भारतले दियो चेतवान।
काठमाडौ । छिमेकी मुलुक भारत रिसाएको रुप प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल र चीनलाई लक्षित गर्दै उसले कडा चेतवानी समेत दिएको छ । जसले अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न जनस्तरमा उठेको छ । छिमेकी राष्ट्रसँगको विवादमा भारतीय गृहमन्त्रीले अहिलेसम्मकै कडा अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले कसैको सीमा मिचेका छैनौं,हाम्रो सीमाको सम्मान नगर्नेलाई सबक सिकाउन पछि हटेका छैनौ भन्दै कडा कुटनीतिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारतले कसैको सीमा नमिचेको दावी गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
भारतीय टेलिभिजन न्युज १८ मा अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपालसहित भारतका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरुको सम्बन्ध बिग्रिएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भारतले कसैको सीमा उल्लंघन नगरेको बताएका हुन्। नेपाल,चीन र पाकिस्तान हाल भारतको विरोधमा रहेको विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा शाहले भने,‘अहिले सबैजना कोरोनाको संकटमा छ। मैले पहिला पनि भनिसकें हाम्रो सीमा सुरक्षाका लागि यो सरकार दृढ रहेको छ। जहाँसम्म फल्स फ्ल्यागको कुरा छ हामीले कसैको सीमा उल्लंघन गरेका छैनौं। तर कसैले हाम्रो सीमा र सेनाको सम्मान गर्दैन भने उसलाई पाठ सिकाउन पछि हटेका छैनौं।
चाहे सर्जिकल स्ट्राइक होस् या एयर स्ट्राइक होस्। यो हाम्रो रेकर्ड विश्वमाझ स्थापित भइसकेको छ। यो हाम्रो रक्षा नीति पनि हो।’पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतले पाकिस्तानमाथि फल्स फ्ल्याग अपरेसन गर्ने तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। यस्तै भारत र चीनबीच पनि सीमामा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। भारत र चीनले कुटनितिक माध्यमबाट समस्या हल गर्ने भएता पनि सीमामा दुवै देशले सेनाको उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ।
नेपालीहरु,, बंगाली, भुटानी र पाकिस्तानी जस्ता होईनन्, मोदि तिमी जस्ता ब्रीटिसको जुत्ताको तलुवा चाटेर स्वतन्त्र भएकालाई के थाहा! देश प्रेमीहरुले से-यर गरौ ।